Falsafadda ku saabsan caafimaadka galmada Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan Falsafadeena ku saabsan Caafimaadka Galmada
Falsafadeena caafimaadka galmada waa in la sameeyo cilmibaaristii ugu dambeysay ee kusaabsan waxa caawiya oo carqaladeeya caafimaadka galmada ee ay heli karaan dhagaystayaal farabadan si qof walba uu u hagaajiyo noloshiisa iyo jacaylkeeda. Waxay ku saleysan tahay qeexitaanka Ururka Caafimaadka Adduunka ee qeexitaanka caafimaadka galmada:
"... xaalad jireed, caadifadeed, maskaxeed iyo bulsho ahaanba leh ee la xiriirta galmada; ma ahan kaliya kaliya maqnaanshaha cudurka, cillad la'aanta ama jirrada. Caafimaadka galmadu waxay u baahan tahay hab wanaagsan oo ixtiraam leh xagga jinsiga iyo xidhiidhada galmada, iyo sidoo kale suurtagalnimada in lagu helo waayo-aragnimo galmo oo raaxo leh oo ammaan ah, xannibaad la'aan, takoorid iyo rabshad. Caafimaadka galmada si loo gaaro loona ilaaliyo, xuquuqda galmada ee dhammaan dadka waa in la ixtiraamo, la ilaaliyaa oo la fuliyaa. " (WHO, 2006a)
Nidaamka abaalmarinta maskaxdu wuxuu isu beddelay inuu noo kaxeeyo abaalmarinnada dabiiciga ah sida cuntada, isku xirnaanta iyo jinsiga si kor loogu qaado badbaadadeena. Maanta, tikniyoolajiyaddu waxay soo saartay noocyo 'supernormal' ah oo ah abaalmarinnadaas dabiiciga ah qaab cunno qashin ah, warbaahinta bulshada iyo filimada internetka. Maskaxdeenu uma ay horumarin inay la qabsato xad-dhaafka ay tani keentay. Bulshadu waxay la kulantaa faafa cudurada dabeecadaha iyo balwadaha khatarta ku ah caafimaadka, horumarka iyo farxada.
Shirkado internet oo balaayiin doolar ah, gaar ahaan warshadaha lulataaye, waxay adeegsadaan "farsamooyinka naqshad sameynta" oo laga sameeyay jaamacadda Stanford 20 sano ka hor. Farsamooyinkan, oo lagu dhisay barnaamijyo iyo degello internet ah, ayaa loogu talagalay in si gaar ah loogu beddelo fekerkeenna iyo dhaqankeenna. Barnaamijyada sida Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, iyo bogagga internetka sida Pornhub, YouTube iwm dhammaantood way isticmaalaan. Waxay ku saleysan yihiin cilmiga neerfaha, cilmu-nafsiga iyo cilmi-baarista cilmiga bulshada si loo bartilmaameedsado rabitaankeenna miyir-qabka ah iyo in la kiciyo damacyada miyir-beelka ah ee nidaamka abaalmarinta maskaxda ee inbadan. Tani waa sababta ay Hay'adda Reward Foundation dadka u baraan nidaamka abaalmarinta maskaxda. Habkaas adeegsadayaashu way fahmi karaan halka ay damacoodu ka imanayo waxayna leeyihiin fursad dagaal oo ay iskaga caabiyaan dabeecadda qabatinka leh ee alaabtan.
Dabeecadaha galmada ee dhibaatada badanaa waxay ka imanayaan waxyaabo 2 ah: maskax ku dhacay waxyeelo weyn iyo walbahaar, iyo jahwareer ku saabsan heerka caafimaadka ee dareenka. Habka takoorka ayaa saameynaya qaabdhismeedka maskaxda, farsameynta iyo go'aan qaadashada. Tani waa gaar ahaan kiiska carruurta iyo dhallinyarada bilowga safarkooda ku aaddan qaangaadhka galmada. Waa marxaladda markii ay ugu nugul yihiin suurtogalnimada in la soo saaro dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo xayiraadaha.
Rajada ayaa soo dhow. Fikradda 'neuroplasticity', awoodda maskaxda ee la qabsiga deegaanka, waxay ka dhigan tahay in maskaxdu iskeed isu bogsan karto markii aan ka saarno walbahaarka. Waxaan ku siineynaa macluumaad ku saabsan halista caafimaadka maskaxda iyo jirka, helitaanka, dambiyada iyo cilaaqaadka iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan dhisida u adkeysiga walaaca iyo balwadda oo ay weheliso warbixinno ku saabsan faa'iidooyinka ka-tagista ka-hortagga galmada. Aqoon hore oo saynis ah looma baahna.
Laba iyo toban sano ka hor imaatinka khadka ballaadhka, ama internetka xawaaraha sare leh, raggu waxay bilaabeen inay la xiriiraan saaxiibkeen Mareykanka ah ee Gary Wilson oo raadinaya caawimaad. Wuxuu wax ku darsaday degel sharaxaad ka bixiyay sayniska ka dambeeya galmada iyo balwadda. Soo-booqdayaasha, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay horay u qaateen internet-ka ballaadhan, waxay ka warbixiyeen sida ay u bilaabeen inay lumiyaan xakamaynta daawashadooda qaawan ee internet-ka in kasta oo aanay jirin dhibaatooyin noocaas ah oo ku saabsan DVD-yada erotic ama joornaalada. Waxay ku yeelaneysay saameyn xun xiriirkooda, shaqada iyo caafimaadka. 'Internetka' qaawan ayaa si uun uga duwanaa Playboy iyo wixii la mid ah.
Ka dib markii uu baaray wax badan, Gary wuxuu sameeyay degel cusub, www.yourbrainonporn.com, si uu u helo marinka caddaynta sayniska ee sharraxaysa horumarkan cusub iyo sheekooyinka dadka tijaabiyay joojinta galmada. Hadalkiisii ​​xog-waranka iyo qosolka badnaa ee dhacdadii ugu horreysay abid ee Glasgow TEDxImtixaanka Porn Porn"Wuxuu hadda ka soo wareegay aragtida 13.7 million ee YouTube waxaana lagu turjumay luqadaha 18. Ilaa maanta, 54 waraaqo cilmi baaris ah waxay xaqiijiyeen natiijooyinkii hore ee Gary. Hadalka TEDx wuxuu ka caawiyay kumanaan dad ah inay aqoonsadaan in dhibaatooyinka caafimaad ee maskaxeed iyo jir ahaaneed iyo niyad jabka xiriirka ay la xiriiri karaan caado ahaan qaawan ee internetka. Isticmaalayaasha sidoo kale way ku mahadsan yihiin ilaha lacag-la'aanta ah ee soo-kabashada qadka tooska ah ee halkaa lagu xusay sababtoo ah caawimaadda la heli karo iyo qarsoodi la'aanta la bixiyay. Dadka qaarkiis waxay u baahan yihiin adeegyada xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka marka lagu daro soo kabashada caafimaadka galmada iyo ladnaanta.
Waxaan dooneynay inaan qeyb ka noqono xalka sidoo kale dhibaatadan bulshada ku baahsan. Si taas loo gaaro, waxaan aasaasnay ​​hay'adda samafalka ee 'Reward Foundation' sanadkii 2014. Marka lagu daro cilmi baaristayada iyo agabyada waxbarista ee ballaaran, waxaan rajeyneynaa inaan bulshada guud ahaan iyo sidoo kale xirfadleyda ku wacyi galino saameynta qulqulka bilaashka ah, qaawan ee internetka ee laga heli karo qasabada 24 saac. maalin. Ujeeddadu maaha in la mamnuuco filimada qaawan laakiin waa in dadka laga dhaadhiciyo xaqiiqooyinka si ay u sameeyaan 'la socodsiin' doorashooyin ku saabsan isticmaalkooda iyo halka ay ka heli karaan caawimaad haddii loo baahdo. Siyaasad dejiyeyaasha, waalidiinta, macallimiinta iyo xirfadleyda kale ee la macaamila dhalinyarada ayaa leh masuuliyad gaar ah inay bartaan saameynteeda.
Bogga bilaashka ah, maqaalada wararka caadiga ah iyo casriyeynta boggaga Twitter
Qorshooyinka casharka bilaashka ah ee iskuulada
Tilmaamaha Waalidiinta ee Bilaashka ah ee Sawirka Internetka
Aqoon isweydaarsiyo tababar ah oo loogu talagalay xirfadleyda ay aqoonsan tahay Kuliyadda Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud
Ololeyaal ku saabsan jinsiga iyo waxbarashada xiriirka maskaxda ee dugsiyada
Olole loogu talagalay dawladaha adduunka oo dhan si ay u soo saaraan sharci xaqiijinta da'da ee filimmada
Dhamaan shaqadeena waxay ku saleysan tahay horumarka ugu dambeeyay ee cilmi-baarista cilmiga sayniska. Dhammaanteen waxaan dooneynaa in aan ka dhigno qaab wax ku ool ah codsigaan, madadaalo si loo barto lana dhiirigeliyo dhaqdhaqaaqa ugu fiican ee rugaha iyo macalimiinta adduunka oo dhan.
WAXAAN LAHAYNAA LAHAYNAA, laakiin waxaanu bixinnaa bixiyeyaasha adeegga bixiyaha ee sameeya.